Warshadaha & Shirkadaha Weelka Weelka La Kordhiyo
Qalabka Weelka Weelka La Kordhiyo ee Raashinka Guryaha ee Nolosha
1.Qasnadda Weelka La Kordhin Karo Guryaha Weelka La Kordhin Karo waa la rari karaa si isdaba joog ah, taas oo ka sii muhiimsan, meel ballaadhan oo loogu talagalay ku noolaanshaha guurguuraha. Waxaa la sameeyaa ka dib markii la balaariyay, cabirku waa qiyaastii 37 ee gurigeenna caanka ah ee qaabdhismeedka, mitir laba jibbaaran, oo qiyaastii ah 2.5 kaas oo ka sameysan waqtiyada birta laydhka ah ee la xidhay. Iyada oo loox leh iyo daaqado sandwich ah oo dahaaran iyo albaab loogu talagalay iyo alwaaxyo. Waxaan bixinaa xalal kala duwan: si sax ah u qalabeysan, waa tor si ballaaran loo isticmaalo macaamiisha. Way madhan tahay gudaha, guriga fasaxa, ...
Shiinaha Prefab guryaha qaybsan porta cabin casa, australia 20ft iyo 40 ft guri weel la ballaarin karo oo iib ah
1.Qafiska Weelka Fidsan 1) Waxaa loo isticmaali karaa hoyga jiifka, isbitaalka kumeelgaarka ah, musqusha, xafiiska, qolka keydinta, iwm. 2) Waa la rakibi karaa waqti gaaban, waxaa lagu soo ururin karaa boolal xoog badan. 3) Waa loo isticmaali karaa si isdaba joog ah cimrigaaga in ka badan 15 sano. 4) Qaab dhismeed sifiican loo xiray oo la isku halleyn karo, biyo-celin, dab-u-adkaysi, qoyaan-celin iyo ka-hortagga sunta. 5) Iyada oo lagu taageerayo tasiilaadka sida weelka lagu dhaqo, qubeyska, qaboojiyaha, godka, iyo wixii la mid ah. Xulashada Midabada Kala Duwan ...
Guri yar oo weel yar oo ballaadhan oo ballaadhan oo 20ft ah (Musqusha, jikada) guryaha prefab ee iibka ah
1.Erpantable Weelka guriga Shayga 20ft / 40 ft guri ballaadhin kara, si dhakhso ah u dhis guryo steel Frame 2.5-3.0 mm tiirarka steel iyo alwaaxda Midab badiyaa cad, midab kale oo RAL ah ayaa la heli karaa. Wall / Roof panel 50/75 mm EPS / dhogor dhagax / PU guddi sandwich Floor Mgo + dabaqa PVC oo leh midab kala duwan si loo doorto Window Daaqad laba jibbaaran oo glazed ah, shaashado duulimaad BILAASH ah waa ikhtiyaar albaab Titanium magnesium daawaha / albaabka alwaax / albaabka saraysa ee PVC Qubeyska Musqusha, Fadhiga T ...